SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 17, 2020 – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 17, 2020
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 17, 2020
Roorroo ulfaataafi Sanyii dugaaggaa hamaan PP tiin Uummata Oromoorratti geggeeffamaa jiru kan yoomii caalaa waan hammaataa jirudha.
W/bahaa Aanaa Eebantuutti gochaan waraana PP tiin maatii tokko gutuurratti raawwate haalaan nama suukkunneessa!
Waggaa tokko dura Eebantuu magaalaa Hindeetti waraanni Mootummaa mana nama Qanaatee Hulluqaa jedhamuu cabsanii seenuun halkan maatii guutuutti dhukaasa banuun Obbolaan Lamaan
Haadhaaf abbaa gidduutti ajjeesanii deeman.
Maatiin kun ijoollee isaa lamaan hawwaallatee utuu gaddallee hin dagatiin guyyaa arraa kanas Ilma isaanii ykn Obboleessa ijoollee ajjeesan kanaa nama Tamasgeen Qanaatee jedhamu waraanni mootummaa hukkaamsee deemeera.
PPn sirnoota darban hunda caalaa haala nama gaddisiisuun maatiifi ilmaan oromoo boossisaafi duguugaa jirti.
Iyyaasuu Qanaatee ajjeesanii
Tamasgeen Qanaatee hidhuun hagam tuffii uummata oromoof qaban agarsiisuudha.
PPn farra Oromoof Oromummaati!
Yeroo ammaa Oromiyaa keessa yoon xiqqaate imaan Oromoo 30,000 olii mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jira ja’ama. Namoonni mata durummaan itti gaafatama qabaan, kan Oromoo cabisuuf halkaniif guyyaa hojjataa jiran jara afran kana. Oromoo ka’ii falmadhu si cabsuuf!
#Nagessa_Oddo_Dube tu Dr. Gammachiis Baallii Jiloo hiisise jechuun holola oofun waan hin fakkaanne. Kuni lafuma kaanee holola maqaa walballeessuu walirratti oofuudha. Maqaa walballeessin kuni qabsoo Oromoo ni quucarsa malee galmaan hin gahu. Sabboontonni sirna #OPDO keessa jiraachun akkuma Oromoo fayyade sirna mootummaa kanaa keessattis sabboontonni jiraachun faaydaa guddaa qabaata. Obbo Nageessan qabsoo Oromoo keessatti nama gahee guddaa qabuudha. Hardha sabboontota hiisisa jedhanii maqballeessii walirratti oofun kuni bu’aa tokkollee hin qabaatu. Kanaafuu holola sobaa walirratti oofurraa of qusachuun waan Oromoo fayyadu irratti xiyyeeffachuun irra bu’aa gaarii buusa.
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 8, 2019 SBO Caamsaa 08, 2019. Oduu fi Rakkoo qubattoota…
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 25, 2018
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 25, 2018 SBO: Oduu, Ijoo Dubbii ABO fi Ibsa Tumsa…
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Caamsaa 3, 2019 SBO Caamsaa 03, 2019. Oduu, Dhorkamuu GGO Aanolee…
Seenaa Gabaabduu – Seeyfuu Muummee, 1948 -2020